Bagan Research Lab-Myanmar NLP
MM POS Tagger
Word Segmentation and Part-of-Speech Tagging Engine
Word segmentation isafundamental problem in Myanmar NLP, whose importance cannot be overestimated. Word segmentation lays the foundation for many task in NLP, such as spelling correction, POS tagging, dependency parsing, etc. Here we have combined word segmenter and POS tagger into one demo.
On the other hand, Part-of-speech (POS) tagging depends heavily on word segmentation and sentence structure. Many issues arose from maintaining consistent segmentation and tagging standard amongst team members to following Myanmar grammatical structure, from capturing the immediate meaning of the sentence to capturing slangs, from technical correctness to adjusting for the end goals. There are so many subtleties that you would have to try out yourself!
Many high level NLP tasks
လူကြိုက်များယုံကြည်ချက်ဆန့်ကျင်, ငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့်ရိုးရှင်းစွာကျပန်းစာသားကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ 2000 ကျော်အသက်အနှစ်အောင်, 45 ​​ဘီစီကနေဂန္ထဝင်လက်တင်စာပေတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအတွက်အမြစ်များရှိပါသည်။ ရစ်ချတ် McClintock, ဗာဂျီးနီးယား Hampden-ဆစ်ဒနီကောလိပ်မှာလက်တင်ပါမောက္ခတစ်ငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့်ကျမ်းပိုဒ်ကနေပိုထင်ရှားတဲ့လက်တင်စကားလုံးများ၏တဦးတည်း, consectetur မျှော်ကြည့်လျက်, ဂန္ထဝင်စာပေထဲမှာစကားလုံးများ၏ကိုးကားမှတဆင့်သွားသည့် undoubtable အရင်းအမြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့် 45 ဘီစီ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ cicero က "က de Finibus Bonorum et Malorum" (ကောင်းမွန်သောနှင့်ဘေးဥပဒ်၏ Extreme) ၏ပုဒ်မ 1.10.32 နှင့် 1.10.33 ကနေလာပါတယ်။ ဤစာအုပ်သည် Renaissance ကာလအတွင်းအလွန်ရေပန်းစားကျင့်ဝတ်၏သီအိုရီအပေါ်တစ်ဦးကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့်၏လိုင်း, "ငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့်ဒေါ်လိုရေစ် amet ထိုင် .. " အပိုင်း 1.10.32 တစ်လိုင်းကနေလာပါတယ်။ အဆိုပါ 1500 စိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့ကိုအောက်တွင်ပြန်ထုတ်ပေးနေပါသည်ကတည်းကငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့်၏စံအတုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ cicero အားဖြင့် "က de Finibus Bonorum et Malorum" မှကဏ္ဍများ 1.10.32 နှင့် 1.10.33 လည်းအိပ်ချ် Rackham အားဖြင့် 1914 ခုနှစျ, ဘာသာပြန်ချက်ထံမှအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းဖြင့်လိုက်ပါသွား, သူတို့ရဲ့အတိအကျမူရင်းပုံစံအတွက်ပြန်ထုတ်ပေးနေကြသည်။
foreign word အခြား ဘာသာစကား
emoticon emotion expressed icon
post positional marker ဝိဘတ်
text number ဂဏန်းစာသား
This is the demo version of the Myanmar POS Tagger, so we do not guarantee 100% for the result.
char limitation - 1000 chars/call
call limitation - 10 call/min
© Copyright 2019 research.baganintel.ai. All Rights Reserved